जसपा : पार्टी छ, केन्द्रीय समिति छैन - Limbuwan khabar
जसपा : पार्टी छ, केन्द्रीय समिति छैन
सोमबार, ०५ असोज, २०७७ दिउँसोको ०२:४६ बजे, लिम्बुवान खबर
५ असोज, काठमाडौं । समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पार्टी एकताको पाँच महिनामा पनि केन्द्रीय समिति गठन गर्न सकेको छैन ।
जबकि जसपा केन्द्रीय कार्यकारीणी समितिले आगामी मंसिर मसान्तभित्र पार्टी समायोजनका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको छ । कार्यकारिणी समितिले निर्धारण गरेको समय सीमा घर्किन तीन महिनाभन्दा कम समय बाँकी छँदा समाजयोजन प्रक्रिया सुरु गर्न नगरी नहुने काम नै सकसपूर्ण बनेको छ ।
खासगरी राजपाभित्रको भागबन्डाको राजनीतिले केन्द्रीय समिति गठन पेचिलो बनेको जसपा नेताहरू बताउँछन् । मधेस केन्द्रित ६ दल मिलेर ८ वैशाख २०७४ मा बनेको राजपाले तीन वर्ष भागबण्डाकै राजनीति गरेको थियो ।
केन्द्रदेखि जिल्लासम्म ६ वटै पार्टीका एकएक जना रहेको अध्यक्ष मण्डल बनाएको राजपाले समायोजनको काम गर्न सकेन । महाधिवेशन गर्ने भनेर पटकपटक महाधिवेशनको मिति तोकेर पनि गर्न नसकेको राजपाले १० वैशाख २०७७ मा सपासँग पार्टी एकता गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याएपछि सपा फुटको संघारमा पुग्यो । त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरुप राजपा र सपाले १० वैशाख मध्यराती हतार–हतार पार्टी एकता घोषणा गरेका थिए ।
सपाबाट ३५१ र राजपाबाट ३५० गरी ७०१ सदस्यीय जसपा केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति भइसकेको छ । तर तत्कालीन राजपातिर भागवण्डा मिलाउनै हम्मेहम्मे परेको छ । स्रोतका अनुसार जसपाका अध्यक्ष समेत रहेका महन्थ ठाकुरले कार्यकारीणी समिति गठन गर्दा गरिएको भागवण्डाकै अनुपातमा केन्द्रीय सदस्यहरू लिने प्रस्ताव गरेका थिए ।
साविक राजपाभित्रै भागबन्डाको खेल
कार्यकारीणी समितिमा राजपाले २६ जना पठाउँदा ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षबाट ८/८, शरदसिंह भण्डारी र महेन्द्र रायका ३/३ र अनिल झा र राजकिशोर यादव पक्षबाट २/२ जना थिए । यही अनुपातमा केन्द्रीय सदस्य छनोट गर्ने हो भने ठाकुर र महतोले १०७/१०७, भण्डारी र रायले ४०/४० र झा र यादवले २७/२७ जना पाउने छन् । तर धेरैले यसमा सहमति जनाएनन् ।
एक नेताका अनुसार सहमतिको प्रयासमा ठाकुर र महतोले ९५/९५ केन्द्रीय सदस्य लिने प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा भण्डारी र रायले ४४/४४ र झा र यादवले ३०/३० जना पाउने छन् । एकतामा आएका जनमुक्ति, जनशक्ति र खम्बुवान समूहबाट १२ जना केन्द्रीय सदस्य दिने नयाँ प्रस्ताव छ ।
यसमा शरदसिंह भण्डारी समूह सहमत भएको छ । ठाकुर, महतो र भण्डारीले आफ्नोतर्फबाट केन्द्रीय समितिमा जाने नेताहरूको नामको सूची समेत बताएका छन् ।
तर, तीन नेता सहमत भएका छैनन् । ‘उहाँहरुले सुरुमा नाम दिन्नौं भन्नु भएको थियो । पछि दुबै अध्यक्षको रोहबरमा बुझाउँछौं भन्नु भएको छ’ तत्कालीन राजपाका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरूले बनाएको सूचीमा कति नाम छ थाहा छैन ।’
साविक सपाका एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य आफ्नो समूहबाट केन्द्रीय सदस्य बन्नेहरूको नाममा कुनै विवाद नरहेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘सपाबाट ५०–६० जनाको नाम हटाउनुपर्ने हो त्यसमा खासै विवाद छैन ।’
ती सदस्यका अनुसार सपातर्फ केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन, संघीय परिषदमा रहनेहरूकै नाम समेत लगभग तय भइसकेको छ ।
केही दिनमै केन्द्रीय समिति : यादव
जसपा नेता महेन्द्रराय यादव केन्द्रीय सदस्य चयन भईरहेको छलफललाई अस्वभाविक रुपमा लिन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘धेरै साथीहरूले म केन्द्रीय समिति बसेर काम गर्छु भन्नुलाई नकारात्मक रुपमा लिनु जरुरी छैन, जसपामा एकसे एक नेताहरू केन्द्रीय सदस्य बन्न योग्य रहेछन् भनेर बुझ्नुस् न ।’
साविक राजपाको अध्यक्ष मण्डल संयोजक रहीसकेका नेता यादव केही दिनभित्रै केन्द्रीय समिति गठन हुने बताउँछन् ।
जसपा नेताहरूका अनुसार केन्द्रीय समिति र संघीय परिषद् गठनपछि मात्र अरु समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यो पनि सहज भने छैन । खासगरी प्रदेश २ को संसदीय दलको नेतामा चयन पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको चर्चा छ । ठाकुर र उपेन्द्र यादव कार्यकारी अध्यक्ष र डा. बाबुराम भट्टराई संघीय परिषदको अध्यक्ष बनाउने र महतोलाई सबैले संसदीय दलको नेता स्वीकार गर्नसक्ने बताइएको छ ।
के होला प्रदेश २ सरकार ?
प्रदेश २ मा संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने भएकाले यसमा सहमति जुटाउन कठिन रहेको एक नेताले बताए । प्रदेश २ मा सपा र राजपाले लालबाबु राउतको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाएका थिए ।
साविक सपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका राउतको कामप्रति राजपाका नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् । तर जसपा अध्यक्ष यादव मुख्यमन्त्री फेर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
एक नेताका अनुसार प्रदेश २ मा संसदीय दलको संसदीय दलको नेता चयनपछि मात्र जिल्लामा समायोजन अगाडि बढ्छ । तर केन्द्रीय समिति गठनदेखि प्रदेश २ को संसदीय दलको नेता चयनसम्मका काम सहज नभएकाले मंसिरको डेडलाइन पुरा नहुने देखिएको जसपाका एक नेता बताउँछन् । (Onlinekhabar)